Izinzuzo ze-Pterostilbene Powder njenge-Nootropics And anti-Aging Supplements Shangke Chemical
Izinzuzo ze-Pterostilbene Powder njengeNootropics Nezinto Zokuguga Zokuguga
1. Yini iPterostilbene?
I-Pterostilbene yindlela ebalulekile yamakhemikhali ekhiqizwa ngokwemvelo empilweni yezitshalo ezithile njengendlela yokulwa nezifo. Le khompiyutha ifana nenye indawo eyaziwa ngokuthi yi-resveratrol futhi itholakala kalula ngefomu lokungezelela. Izithasiselo zePterostilbene zitholakala kakhulu nge-bioava. Lokhu kusho ukuthi zingangenwa kalula emzimbeni futhi ngokushesha futhi azonakaliswa lapho kugayishwa. I-Pterostilbene powder nayo isebenza kahle, nokho impilo yayo engxenyeni ifushane kakhulu ngoba ingaphansi kwemizuzu eyi-100.
Imithombo yokudla yePterostilbene
I-Pterostilbene Imithombo yokudla ifaka ama-blueberries, ama-alimondi, ama-cranberry, ama-mulberry, amantongomane, iwayini elibomvu, amagilebhisi abomvu, amaqabunga omvini, amagxolo esihlahla sase-India, i-Red sandalwood, ne cocoa. Ama-Blueberries, nokho, angumthombo wokudla ophakeme kakhulu wePterostilbene, kodwa inani lama-blueberries liqukethe lincane ngokuqhathaniswa ne-Pterostilbene supplements. Okuqukethwe yi-Pterostilbene blueberries kukholelwa ukuthi cishe kungama-99 kuya kuma-52 ama-nanograms, kuwo wonke amagremu ama-blueberries.
Indlela yokusebenza ye-Pterostilbene ihlukile kuleyo ye-resveratrol. I-Pterostilbene compound iyona enamandla kunazo zonke i-stilbene. Izinzuzo ezahlukene ze-Pterostilbene powder zihambelana nendlela yokusebenza ehlukile nayo. Isenzo se-pharmacological se-trans-pterostilbene sifaka i-antineoplastic, antioxidant, ne-anti-inflammatory.
I-Pterostilbene ikhombisa imisebenzi ephumelelayo ye-antifungal enamandla izikhathi eziyishumi kune-resveratrol. I-Pterostilbene compound nayo ikhombisa imiphumela yokuthambisa. Ukuvikelwa kwezitshalo kusuka kuma-pathogens amaningana kubonakala kuyindlela ebalulekile yama-stilbenes, kufaka phakathi i-Pterostilbene, futhi le misebenzi ifinyelela nasezilwaneni nakubantu.
I-Pterostilbene ibuye ikhombise imiphumela ye-anticancer ngokusebenzisa izindlela eziningi zamamolekyuli. Ucwaningo lubonisa ukuthi izenzo ze-Pterostilbene zifaka izinhlobo ze-tumor suppressor, izindlela zokushintshwa kwezimpawu zesiginali, i-oncogene, izinhlobo zokwehlukanisa amaseli, nezinhlobo zokulawula umjikelezo weseli.
Izakhiwo ze-antioxidative zePterostilbene zihluke kakhulu kulezo zerveratrol. E-resveratrol, amaqembu amathathu we-hydroxyl enza i-ROS ingasebenzi (izinhlobo ezisebenzayo ze-oxygen) kuma-lymphoblasts angaphandle negazi lonke ngenkathi iPterostilbene, eneqembu eli-1 le-hydroxyl namaqembu e-2 methoxy anciphisa i-extracellular ROS. Ukwenziwa kwasendaweni kwezakhiwo ze-antioxidation kuvumela ukusetshenziswa kwe-Pterostilbene powder ukukhomba izinhlobo ze-oxygen ezisebenzayo ezingaphandle, ezibangela ukulimala kwezicubu ngesikhathi sokuvuvukala okungapheli.
Ngezansi kunezindlela eziningi ze-pterostilbene zesenzo okuxoxwe ngazo ngemininingwane;
Indlela yokusebenza yePterostilbene; Ukwenza ku-Sirtuin
I-Pterostilbene ivusa umgudu wokusayinela i-SIRT1 kumaseli anikela ukuvikela ekulimaleni kwamaselula, ngokwenza kanjalo ayisebenzise. Le ndlela yokuphakamisa i-p53 expression. I-P53 iprotheni evikela i-DNA emonakalisweni futhi ivikele amaseli ekuguqukeni kwezakhi zofuzo okungadala umdlavuza.
I-SIRT1 ingakuvikela emonakalweni nasekuwohlokeni kwamaseli, okuthuthuka njengoba ukhula.
Imiphumela Yokulwa Nezifo
Ucwaningo oluningi selukhombisile ukuthi ukuvuvukala kwamakhemikhali e-pterostilbene eqondiswa yi-TNF-alpha (tumor necrosis factor-alpha). Ukucindezela kwe-Oxidative kuletha ukuvuvukala; I-Pterostilbene ivimba i-interleukin-1b ne-TNF-alpha ngokunciphisa izinhlobo ze-oxygen ezisebenzayo.
Le khompiyutha ivikela futhi ekulweni nengcindezi engxenyeni yemishini yamaselula eyaziwa ngokuthi i-ER (endoplasmic reticulum). Ocwaningweni, lapho izintambo zamangqamuzana emithambo yegazi zivezwa nguPterostilbene powder, ukuhlangana kwawo akaphendulanga kwizimpawu zokuvuvukala, futhi azibonakalanga ziluhlaza.
Indlela yokusebenza yePterostilbene; Imiphumela Yokulwa Nomdlavuza
Ngokumangazayo, ngaphandle kokunciphisa ukucindezela kwe-ER (endoplasmic reticulum) ekuxhumekeni kwemithambo yegazi, iPterostilbene ikhulisa ukucindezela ku-endoplasmic reticulum yamaseli womdlavuza womphimbo. Ngakho-ke, ilimaza ngokukhetha amangqamuzana anomdlavuza futhi ivikela ekucindezelweni kwe-oxidative kumaseli anempilo.
Kumaseli omdlavuza womgogodla noma ubuchopho (glioma), uPterostilbene wehlisela iBcl-2 futhi ukhulisa iBax; lolu shintsho lukhulisa amasiginali “wokuzibulala” amangqamuzana abulala amaseli omgogodla noma ubuchopho.
Amaseli womdlavuza asebenzisa indlela eyaziwa ngokuthi yi-Notch-1, ukuzivikela esenzweni semithi ye-chemotherapy, kubandakanya i-oxaliplatin ne-fluorouracil. I-Pterostilbene ivimba i-Notch-1 isayina okwenza ama-tumors azwele kakhulu ekwelashweni nge-chemotherapy.
I-Pterostilbene yehlisa ukukhiqizwa kwamakhompiyutha amaningi akhuthaza umdlavuza wamaphaphu, kufaka phakathi i-MUC1, b-catenin, Sox2, NF-κB, ne-CD133. Le miphumela ehlanganisiwe inciphisa ukuvuvukala futhi ikwenze kucishe kungenzeki ukukhula kwamaseli womdlavuza.
I-Pterostilbene iyakwazi ukuqondisa isifunda se-hippocampus ngokukhetha ebuchosheni. Lapha, kukhuthaza i-CREB (i-cAMP reaction element-binding protein), i-BDNF (i-neurotrophic factor), ne-MAPK (i-mitogen-activated protein kinases),
Amaprotheni amathathu lawo asiza ama-neurons ekwandiseni, ekukhuleni nasekuphenduleni ngempumelelo ezindaweni ezikuzungezile. Ama-antidepressants e-SNRI abuye abhekise kulezi zindlela.
I-Pterostilbene iphinda futhi ikhuthaze iphrotheyini eyaziwa ngokuthi i-Nrf2 ku-hippocampus, yona ekhulisa ukuvezwa kwamaprotheni e-antioxidant.
I-Pterostilbene ivimbela umzimba ekulweni nesifo i-Alzheimer's ngokunikeza ukuvikelwa kwengqondo ekulweni ne-beta-amyloid (Aβ). Ukwenza lokhu ngokubandakanya i-Akt ne-PI3K, amaprotheni amabili asekela ukukhula kwe-neuron, inkumbulo nokufunda.
3. Izinzuzo ze-Pterostilbene powder
Okuxoxwe ngakho ngezansi yizinto ezintathu ezibaluleke kakhulu i-pterostilbene powder izinzuzo;
i. Pterostilbene njengoba ama-nootropics
Njengoba sikhula, izindlela ezintsha zokucabanga ziba nzima ngokwengeziwe ukwakha, futhi izinkumbulo ziba nzima ukufinyeleleka. Ukungakwazi ukwenza imisebenzi ejwayelekile yokuqonda kuyokwehla. Izithasiselo zePterostilbene zingasiza ekwakhiweni kwendawo ye-neural evuselelwe kunoma iyiphi iminyaka.
I-Pterostilbene iyi-nootropic enamandla, esiza ekuphumuleni kwengqondo nasekuthuthukisweni kwengqondo. Futhi kuthathwa kaningi ngesikhathi sangaphambi kokuzivocavoca ngenxa yamandla aso ekusizeni i-vasodilation yemithambo yegazi. Ngakho-ke, inikeza imiphumela efana naleyo yezinye izithako ze-nitric oxide boosting.
Inzuzo ye-Pterostilbene nootropic kukholakala ukuthi ingumphumela wekhono layo lokuthuthukisa amazinga e-dopamine. Kumagundane, iPterostilbene yehlise ukukhathazeka futhi yathuthukisa ukujula. Ocwaningweni oluhilela izinduku ezindala, izithasiselo ze-pterostilbene ziphakamise amazinga e-dopamine kanye nokuqonda okuthuthukile. Futhi, lapho i-Pterostilbene yenziwe itholakala kuma-rins 'ubuchopho hippocampus, inkumbulo yabo yokusebenza yathuthukiswa.
Kokunye ukuhlola okubandakanya amagundane, iPterostilbene iphinde yathuthukisa ukukhula kwamaseli amasha ku-hippocampus. Futhi, amaseli we-stem akhishwe ebuchosheni bamagundane akhula ngokushesha lapho evezwa yiPterostilbene.
Ngokusho kwezifundo zeseli, i-pterostilbene powder ivimba i-MAO-B (i-monoamine oxidase B) futhi ikhuphule i-dopamine etholakala ezingqondweni zethu. Lesi senzo sifana nezidakamizwa ezilapha isifo sikaParkinson, njenge-rasagiline, i-safinamide, ne-selegiline. Ocwaningweni, i-Pterostilbene futhi ivikela ama-neurons ekulimaleni okuhlobene nesifo i-AD (isifo i-Alzheimer's).
Amandla wokulawula ukukhathazeka nge-Pterostilbene nayo ikholakala ukuthi ingenxa yamandla ayo okuvimba i-monoamine oxidase B. Ocwaningweni oluthile, uPterostilbene wakhombisa umsebenzi we-anxiolytic ngezikhathi ezimbili nemithamo ye-mg / kg eyodwa. Lo msebenzi wokuxakeka wekhompiyutha wawucishe ufane nowe-diazepam ngasikhathi sinye namabili mg / kg kwi-EPM.
ii. Pterostilbene futhi Ukukhuluphala
Ucwaningo luphenye ikhono lePterostilbene ukuphatha ukukhuluphala kukhombisile ukuthi kunokuhlangana okukhulu phakathi kokuqina kokuqina kwepterostilbene kanye nokulawulwa kwesisindo. Ososayensi bakholelwa ukuthi i-Pterostilbene powder inamandla okuthinta amazinga e-fat mass ngenxa yamandla ayo okwehla kwe-lipogenesis. I-Lipogeneis inqubo yokuqamba amaseli amaningi ngokweqile. Pterostilbene futhi kuqinisa ukushiswa kwamafutha noma i-oxidation enonile esibindini.
Ocwaningweni oluhilela abantu asebekhulile abaneminyaka ephakathi ne-cholesterol ephezulu, iqembu lababambiqhaza ababengazidli izidakamizwa ze-cholesterol lalahlekelwa isisindo esithile ngenkathi bethatha izithasiselo ze-pterostilbene. Le miphumela ifike isimanga kubaphenyi ngoba lolu cwaningo belungehloselwe ukukala isengezo se-pterostilbene njenge-aid ukulahleka kwesisindo.
Izifundo zezilwane nezeseli futhi zibonisa ukuthi i-pterostilbene compound ingasiza ukuthuthukisa ukuzwela kwe-insulin. Lokho okwenziwa nguPterostilbene ukuthi kuvimba inqubo yokuguqula ushukela ube ngamafutha. Kuvimbela futhi namaseli wamafutha ekukhuleni nasekuphindaphindeni.
I-Pterostilbene ibuye iguqule ukwakheka kwe-gut flora emathunjini futhi isize ukugaya ukudla.
Izindondo ezazondliwe ngePterostilbene zazinezimbali ezinempilo futhi zikhulisa kakhulu i-Akkermansia muciniphila. A. muciniphila luhlobo lwamagciwane olubonakala luvimbela ukuvuvukala kwebanga eliphansi, ukukhuluphala nesifo sikashukela. Le bacterium isibe yingxenye enkulu yocwaningo lwe-probiotic muva nje.
iii. I-Pterostilbene Ithuthukisa Isikhathi Eside
Izinzuzo zokulwa nokuguga kwePterostilbene zixhunywe kumakhemikhali we-bioactive owaziwa ngeTrans-pterostilbene. Leli khemikhali kufakazelwe ukuthi linciphisa ukuvuvukala, ukwehla komqondo okubucayi, nokwenza ushukela wegazi uzinze. Ezifundweni ze-vivo neze-vitro zisekela imiphumela kaPterostilbene yokuvimbela kanye nokwelapha. Leli khemikhali libuye lisebenze njenge-m caletic ye-caloric limited mimetic, ekhuthaza umzimba ukuthi ukhulule ama-biochemicals, kufaka phakathi i-adiponectin eyehlisa inqubo yokuguga ngenkathi ikhuthaza ukuphulukiswa.
Lesi sengezo sokulwa nokuguga saziwa kakhulu ngokuvikela ezifweni ezihlobene nobudala, ngaleyo ndlela sandise isikhathi sokuphila. Ezintweni zamagundane, imithamo ephansi yalezi zimpawu zamakhemikhali ezincishisiwe ezihlobene nokuguga. Ucwaningo luphakamise ukuthi ukudla imithombo eminingi yokudla ye-pterostilbene efana nama-blueberries kungabambezela izinselelo zempilo ezihlobene nokuguga, kufaka phakathi ukuwohloka komqondo kanye nomdlavuza.
4. I-Pterostilbene ne-resveratrol
Akungatshazwa ukuthi iPterostilbene ne-resveratrol zihlobene kakhulu. I-Resveratrol yaziwa kabanzi ngokuthi ngamakhemikhali we-bioactive ewayinini elibomvu nasemvinini.
Izinzuzo zezempilo ze-resveratrol ziyefana nalezo zePterostilbene futhi zifaka phakathi ukuvikela i-Alzheimer's, imiphumela ye-anticancer, ukuqiniswa kokukhuthazelela kwamandla, imiphumela yokulwa nokuvuvukala, amandla alwa nesifo sikashukela nezinzuzo zenhliziyo.
I-Pterostilbene empeleni ngamakhemikhali ifana ne-resveratrol, kodwa ucwaningo seluvele lwabika ukuthi iPterostilbene ingaba namandla kakhulu kune-resveratrol ekuphatheni kwezinye izimo zezempilo. I-Pterostilbene ikhombisile amandla amaningi ekwandiseni ukusebenza kwengqondo, impilo ye-inhliziyo, kanye namazinga eglucose.
Ukuphila kwesigamu sePterostilbene nakho kufushane kunokuphila kwengxenye ye-resveratrol. I-Pterostilbene empeleni iyashesha ukuthola amahlandla amane ohlelweni lokugaya emzimbeni kunokuba ibuye kabusha. Ngokucatshangelwa, lokhu kungenza ukuthi i-Pterostilbene isebenze kahle izikhathi eziningi kune-resveratrol. Kodwa-ke, kwenziwa izifundo eziningi ukuze kuqinisekiswe lokhu.
I-Pterostilbene ne-resveratrol nazo kwesinye isikhathi ziyahlanganiswa ukunikela ngesengezo sokuhlanganiswa ngendlela ye-capsule. Isengezo sokuhlanganiswa sikholwa ukuthi sinamandla amakhulu njengoba sihlanganisa inzuzo yezinhlanganisela ezimbili.
5. I-Pterostilbene isengezo
Akungatshazwa ukuthi ukuze uzuze izinzuzo ezifiseleka kakhulu zePterostilbene, kunconywa ukuthi uyithathe njengesengezo sika-powder. Izithasiselo zePterostilbene athengiswa ezitolo eziningi zokudla zemvelo nasezitolo ze-inthanethi ezikhethekile kwizithasiselo zokudla. Ungathola futhi abakhiqizi be-pterostilbene online.
I-Pterostilbene i-supplement itholakala kakhulu kwifomu lamakhompiyutha, ngemithamo eyahlukahlukene. Kufanele ufunde ngokucophelela ilebula noma ilebula bese uqaphela inani le-Pterostilbene kwikholamu ngayinye ngaphambi kokuyithenga. Lokhu kubalulekile ngoba imithamo ehlukile ingakhombisa imiphumela ehlukile.
Futhi, eminye imithamo ye-pterostilbene supplement ingahle ibe ngaphezulu kunalokho okuye kwenziwa ocwaningweni lwabantu. Imithamo ejwayelekile kakhulu itholakala phakathi kwe-50 mg ne-1,000 mg kuyo yonke i-capsule.
Njengoba kushiwo ngaphambili, ama-supplements okuhlanganisa nawo ayatholakala, ngenhlanganisela ethandwa kakhulu yiPterostilbene ne-resveratrol. I-Pterostilbene ibuye ihlanganiswe ne-curcumin, itiye eliluhlaza okotshani, i-astragalus, nezinye izinto zemvelo.
Ungathola futhi okhilimu be-sunblock aqukethe i-Pterostilbene yize lokhu kuyivelakancane. Inani le-Pterostilbene elidingekayo ukukuvikela ngempumelelo ekulweni nomdlavuza wesikhumba alifundiswanga, kodwa linganikeza ukuvikela okwengeziwe.
6. Ungawuthola kuphi ikhwalithi ephezulu kakhulu yePeterostilbene powder?
Uma ufuna i-pterostilbene powder ephezulu ethengiswayo, lapho usendaweni efanele. Singomunye wabakhiqizi abaziwa kakhulu, abanolwazi, nabanolwazi kuma-pterostilbene eChina. Sinikezela ngemikhiqizo ehlanzekile futhi ehlanganiswe kahle esivivinywa njalo ihlolwe yelebhu esezingeni lesithathu lezwe ukuqinisekisa ukuhlanzeka nokuphepha. Sihlala siletha ama-oda phesheya kwe-US, i-Europe, i-Asia, kanye nezinye izingxenye zomhlaba. Ngakho-ke uma ufuna ukuthenga i-pterostilbene powder esezingeni eliphakeme kakhulu, vele uxhumane nathi manje.
URimando AM, Kalt W, Magee JB, Dewey J, Ballington JR (2004). "Resveratrol, pterostilbene, kanye piceatannol ku vaccinium amajikijolo". J Agric Chem Chem. 52 (15): 4713-9.
I-Kapetanovic IM, Muzzio M., Huang Z., Thompson TN, McCormick DL Pharmacokinetics, bioavailability ngomlomo, kanye ne-metabolic profile ye-resveratrol kanye ne-dimethylether analog yakhe, i-pterostilbene, kumagundane. Chemother. I-Pharmacol. 2011; 68: 593-601.
Ukuphepha kwe-transveratrol yokwenziwa okwenziwa njengokudla kokuphilayo okuhambisana nomthethonqubo (EC) No 258/97 ″. I-EFSA Journal. Isiphathimandla Sokuphepha Kwe-European Food, i-EFSA Panel Emikhiqizweni Yezidakamizwa, Ukudla Okunomsoco kanye Nokwaliwa. 14 (1): 4368
Becker L, Carré V, Poutaraud A, Merdinoglu D, Chaimbault P (2014). "Ukucabanga kwe-MALDI ngobuningi bokubona indawo ngesikhathi esisodwa sama-resveratrol, i-pterostilbene kanye ne-viniferins emaqabungeni angamagilebhisi". Amamolekyuli. 2013 (7): 10587-600.
Izinzuzo ze-3.Pterostilbene powder
6.Ukuphi ukuthola ikhwalithi ephezulu kakhulu yePeterostilbene powder?